Dheeraad nin doona iyo mid ku dhega xaqiisa!
Qalinkii Axmed Iid Aadan,
Dhaqanka bulshooyinka af-soomaaliga ku hadlaa sida dhaqammada dadka kale ayuu qaybo wanaagsan iyo qaybo xun ba leeyahay. Adduunka ma jiro dhaqan wada fiicani, sidoo kale ma jiro mid wada xumi. Waxa jirta maahmaah tiraahda “Geed walba in gubta ayaa hoos taalla”. Waa run, dhaqan kastaa waxa uu leeyahay qayb isaga ka mid ah, oo haddana isaga laftiisa guuldarro ku ah. Qaybtaasi waxay inta badan sababsataa caddaalad darro, ama dulmi kale, ama edebdarro, ama intaas oo dhanba.
Nin baan mar ka maqlay isaga oo leh: “Haddii dhaqankeenna cillado yar yar oo ku jira laga saari lahaa, bulshooyinka adduunka ku nool oo dhan ayuu dastuur u noqon kari lahaa.” Hadalkaasi waa hadal la garan karo, hase yeesho ee haddii ay sidaa noqoto dhaqankeenna oo keliya arrintu kuma koobnaanayso, ee kuwa kalena waa la mid, oo mid kasta oo inta xun laga saaraaba waxa uu soo bixi karayaa mid fiican oo dadkiisa iyo dad kaleba anfaci kara. Dawladnimaduba sow markeedii hore may ahayn habdhaqan ay bulshooyin gaar ahi leeyihiin, kaas oo markii lagu qancay ay dadka kalena qaateen, ciddii lahaydna kaga daydeen?.
In ay ummaduhu samaha iskaga daydaan ama kala qaataan dan weyn ayaa ku jirta. Dadka arrimaha nolosha wax ka qora ee shisheeyaha ah qaar ka mid ah ayaa mararka qaarkood sheega in nabadgelyo xumada meel ka dhacdaa aanay halis ku ahayn dadka halkaas ku sugan oo keliya, ee ay halis ku tahay xataa dadka kale ee adduunka ballaadhan meel kasta kaga nool. Wanaaggu isna waa uu faafaa, oo wixii horumar ah ee meel ka bilaabma ummmadaha kale ayaa xataa ka qayb qaadan kara oo ay dani ugu jirtaa.
Guud ahaan bulshooyinka soomaalida waxa u wanaagsan in ay dadyowga kale ee ka aqoonta badan kaga daydaan sida danaha guud loo wadaago, dhaqanka qoraalka iyo aqoonta, iwm. Labadaa dambe waxay wataan nabad iyo degganaansho; nabad iyo degganaanshana waa wax maanta si weyn loogu baahan yahay.
Qaybaha aan wanaagsanayn ee dhaqanka soomaalida ku jira
Qaybaha aan wanaagsanayn ee dhaqanka bulshooyinka soomaalida ku jiraa waxay shiiqiyaan ama cad saaraan qaybaha kale ee fiican, waxana ka mid ah qabka aan waddaniyadda waafaqsanayn, quudhsiga, naxariisdarrada, sadbursiga iyo qabyaaladda siyaasadaysan, iwm.
Qabka aan waddaniyadda ku salaysnayni waa ka tollalka iyo dadka ehelka kala gura ee ay mararka qaarkood dad iyo duunyo labadaba ku waayaan. “Qab qab dhaafay baa laba qabiil, qaran ku weydaaye”. Marka ay dadku garan waayaan in ay siman yihiin, ee ay qolaba qolada kale hoos iyo gondaheeda ka eegto runtii dhibaato ayaa dhacaysa, dadnimaduna waa ay dhimanaysaa. Waxaa inta badan waxaa keena garasho yari ama barbaarin aan wanaagsanayn, ama labadaas oo wada socdaba.
Quudhsigu qodobkaa hore ayuu ku taxan yahay, waana caado xun oo la qabatimay. Waa dulmi lagu hayo qaybo dhan oo muwaaddiniinteenna ka mid ah. Waa iyada oo dad lagula kaco waxaan qabannin, xuquuqdoodana laga dhigo sidii caleen xagaa caddeeyay oo kale – waxba kama jiraan. Waa waxyaalaha u baahnaa in wax laga qabto, hase yeesho ee markii ay dadkeennu ku guuldarraysteen in ay xal u helaan ay ku maahmaaheen: “Caado la gooyaa cadho Alle ayey leedahay.” Xaggay ka leedahay, ma caado xun oo la gooyo ayaa cadho Alle keenaysa?!
Naxariisdarradu waxay ka mid tahay dabeecadaha lagu yaqaanno dadka aan aqoonta lahayn, inta badanna dadkeennu faan ayey ba moodaan. Mas’uulka awoodda qaranka ee aanu keligii lahayn dadka ku dhibaateeya, amaba wax laaya waxaa lagu ammaanaa in uu yahay nin adag oo geesi ah! Macallin ardayda karbaasha waa la qaddariyaa malcaamaddiisana waa laga jecel yahay ka dhiggiisa ah ee naxariista iyo waanada wax ku wada. Carruurta yar yar kuwa caqliga iyo fahmada hibada u leh lama dhiirri-geliyo, ee waxaa la jecel yahay kuwa qalqaaliga ah ee madaxa ku socda, waxana lagu sheegaa firfircooni. Laakiin firfircoonidu ma aha qalqaalinimo iyo in madaxa lagu socdo!
Sadbursiga iyo qabyaaladda siyaasadaysan ayaa iyaguna ka mid ah waxyaalaha la eeday. Waxa la calafsanayo ama waxa sadbursiga lagu doonayo marar badan ayaan dan laga gelin sida ay ku imanayaani in ay sax tahay iyo in kale, ee la iska qaataa uun. Dadka xilalka haya qaar baan hantida lagu aamminay ilaalin isla markaana xishoon jeer ay ilkuhu xanaf darreeyaan ama ay hantidaasiba gabaabsi noqoto.
Qof kasta oo afka soomaaliga ku hadlaa, dalka uu doono ha u dhashee, waa uu garanayaa sadbursiga iyo qabyaaladda siyaasadaysani in ay yihiin dhibaatooyin la eeday, haddana lama dayn karayo ee waa la wadayaa. Sababtu waa maxay? Ma wax awooddeenna ka baxsan baa? Waxa ugu daran qaar ka mid ah dadka dibedaha wareega ee barafaseernimada sheegta, kuwaas oo mararka ay idaacadda BBC ka hadlayaan isu egaysiiya sidii dad qabyaalad iyo wax la mid ah ka gudbay, haddana doodahooda aad ka dareemi karto dareen qabyaaladeed ama dadnacayb ku salaysan waxaan la fahmi karayn. Qabyaaladdu waa wax inta badan laga siman yahay, marka laga reebo dad kooban oo aafadaa dhibteeda garanaya.
Haddii uu qof xukun qabto la iman maayo dhaqan dawladnimo, ee waxa uu u dhaqmayaa sidii uu u dhaqmi jiray markii uu xaafaddooda joogay oo kale. Waxa laga yaabaa in uu moodaba in xafiiska qaran ee loo siman yahay ee uu joogaa uu yahay mid uu reerkooda oo keliya xaq u leeyahay, dadkana ay xaq u leeyihiin xafiisyada kale ee ay joogaan dadka iyaga la haybta ahi. Taasi waxay keentaa in xafiisyada la isku dulmiyo, hawshii guud ee danta ahaydna ay curyaanto.
Waxa markaa dhacaysa in ay dad badani xuquuqdooda waayaan. Marka ay sidaasi dhacdo dadku waxay u kala qaybsamayaan labo qaybood: qayb intoodii iyo dheeraad ba haysata, iyo qayb wax raadinaysa oo aamminsan in ay ku raadjoogto xuquuq ka maqan oo ay gar u lahayd, si badheedh ahna loo duudsiyey. Halkaa marka aynu marayno bal aynu isha ku yara dhufanno beydad arrintaas ku saabsan oo ku jiray maansadii Dhahar ee uu tiriyey abwaan Maxamed Ibraahin Warsame (Hadraawi). Wuxuu yidhi abwaanku:
Dheeraad nin dooniyo,
Nin ku dhega xaqiisoo,
Dhacsanaayey baa jiray!
Saamaynta dhaqanka iyo caddaaladda
Dhaqanka ay ummadi leedahay waxa uu muujiyaa garashada ummaddaasi heerka ay gaadhsiisan tahay, waxay jeceshahay, waxay aamminsan tahay, fekerkeeda iyo waxyaalo kale oo geedahaa baxaya ka badan. Waxa uu saamayn ku yeeshaa xoogagga nolosha, siyaasadda oo ka dhalata isdhexgalka bulshada iyo degaan-juqraafiyeedka, aragtiyaha, hadba danta loo jeedo, halbeegga qiimaynta dadka iyo jihaynta dadaalka iyo waxqabadka dadweynaha. Bulshadii dhaqankeedu wax dhiso waxaa lagu tilmaamaaa bulsho garasho sare leh oo ilbax ah, halka bulshada ay dhaqankeeda qaybaha dambeeyaa ku badan yihiin na lagu tilmaami karo bulsho aan garasho badan lahayn, oo u baahan in ay dadaal badan samayso.
Dhibaatooyinka dhaqanka qaybihiisa dambeeya ka iman karaa haddii ay kooban yihiin iyo haddii ay galalka Oogo ka badan yihiin ba waxa lagaga bixi karaa uun caddaalad iyo xeerar wanaagsan oo la isla oggol yahay in la dejisto. Caddaaladda la sheegaa wax kale ma aha ee waa in si fiican loogu dhaqmo xeerarka la dhigtay, oo aan laga dhigin wax marna afka laga sheegsheego, markii la doonana laga tallaabsado.
Dadkeennu in badan bay maqleen ama maqlaan iyada oo lagu celcelinayo ereyga “caddaalad”, hase yeesho in yar baa malaha aragtay iyada oo ereygaas ficil ahaan la isugu dayayo. Ummadaha horumaray qowmiyado kala af iyo kala diimo ah ayey caddaalad iyo sharaf ku maamulaan, halka aynaan innagu labo xaafadood kala saari karin. Caddaaladda waxaa lagu gaadhi karaa uun in xeerarka lagu dhaqmo, ciddii ku dhaqmi weydana aan loo dulqaadannin.
Soomaalida waxa kala dilayba waxay ahayd caddaalad darro: in ay cidi dheeraad doonto, cidina ay xuquuqdeeda weydo. Soomaalida, inta garansan maahee, inta kale waa in ay ogaataa in ay danteedu ku jiro in la kala noqdo dawlado kala madax bannaan oo xidhiidh sokeeyanimo leh, iyo in la helo xeerar fiican oo caddaaladda dhidibbada u adkeeya. Sidaa si aan ahayni waa uun isqabqabsi iyo iska-daba-wareeg; isqabqabsi iyo iska-daba-wareegna faa’iido malaha!.